အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဒိုမီနီကာတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း - ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ
●ဘဏ်အကောင့်ရှိသည့် Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dominica
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်၊ ဒိုမီနီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊
Million Makers Dominica သည်ဒိုမီနီကာနှင့် ၁၀၉ နိုင်ငံများအတွက်ဖောက်သည်များအားအခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာမှကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒိုမီနီကာမှကမ်းလွန်ဒေသများနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
Dominica တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပို့ခြင်း။
သင်၏ဒိုမီနီကာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ။
ဒိုမီနီကာအတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ ဒိုမီနီကာအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ဒိုမီနီကာအတွက် Virtual နံပါတ်၊ ဒိုမီနီကာအတွက် CRM Solutions၊ ဒိုမီနီကာအတွက် virtual ရုံး၊ ဒိုမီနီကာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် 109 နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
သင်၏ Dominica International Business Company အမည်ကိုယနေ့ရယူပါ။
သင်၏ Dominica International Business Company အမည်ကိုရှာပါ
ဒိုမီနီကာ၊ ကာရေဘီယန်အရှေ့ဘက်ရှိအငယ်စားအန္တာရယ်ကျွန်းစု။ ၁၉၇၈ တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရချိန်မှ စ၍ တိုင်းပြည်သည်ဓနသဟာယအဖွဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေအများစုမှာအာဖရိကတိုက်တွင်ကျဆင်းလာသည်။ အချို့သောဥရောပသားများ၊ အိန္ဒိယတိုက်ငယ်မှကာရစ်နှင့်ကာရစ်လူမျိုးများရှိသည်။ ကရစ်များအလွန်များပြားသောကာရစ်ဘီယံအများစုသည်ကျွန်း၏အရှေ့ဘက်ရှိကာရစ်နယ်နိမိတ် (၃,၇၀၀ ဟက်တာ) ကာရစ်နယ်မြေတွင်နေထိုင်ပြီးဒိုမီနီကာ၏ကံဆိုးစွာနေထိုင်သူများထဲတွင်ပါဝင်သည်။ စီးပွားရေးသည်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအပေါ်မှီခိုနေသည်။ တိုးချဲ့ရန်ကြိုးပမ်းမှုများသည်တိုးတက်လာသည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့်ဆိုင်သောaရိယာအနည်းငယ်နှင့်အတူအောင်မြင်မှုအချို့ရရှိခဲ့သည်။
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်း၏အားသာချက်များသည်လာမည့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဆွဲဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့နှင့်အနောက်တိုင်းအရည်အချင်းများပြည့်မှီသော Hispaniola ကျွန်းရှိကာရစ်ဘီယံ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်သည်။
စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ သမိုင်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်းကျင်ရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနှင့်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံသည်စားပွဲသို့ခေါ်ဆောင်လာရန်တစ်တန်ရှိသည်။ ကာရစ်ဘီယံအသိုင်းအဝိုင်း (CARICOM)၊ ဗဟိုအမေရိကန်လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက် (CAFTA) နှင့်မြောက်အမေရိကနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့နှင့်မတူညီသောအစီအစဉ်များအနေဖြင့်နိုင်ငံသည်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တိုးတက်မှုအသစ်များကိုဖွင့်လှစ်ရန်စျေးကွက်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်း - အရေးကြီးမြေမျက်နှာသွင်ပြင်areaရိယာ
အရှေ့နှင့်အနောက်ကာရစ်ဘီယံကြားတွင်တည်ရှိပြီးဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံသည်လဲလှယ်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဗဟို၊ တောင်နှင့်မြောက်အမေရိက၏ကြီးမားသောစီးပွားရေးကဏ္sectorsများအကြားဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ အဆိုပါနိုင်ငံသည်ဟေတီနှင့်ဆင်ခြေလျှောတွင်သာရှိသည်။ အမေရိကန်စင်တာမိုင်ယာမီနားတွင်ရှိပြီးဗဟိုအမေရိကန်စီးပွားရေးကိုဖန်တီးသည်။
CARICOM နှင့် DR-CAFTA မှတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလွတ်လပ်စွာတိုးတက်ခြင်းကြောင့်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံသည်အကျိုးအမြတ်ရရှိသည်။ CARICOM ကိုအဖွဲ့ဝင် ၁၅ နိုင်ငံဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးထိုဒေသတွင်တွဲဖက်အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး ပါ ၀ င်သည်။ ဒေသတွင်းငွေရေးကြေးရေးပူးပေါင်းမှုနှင့်ချဲ့ထွင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်စီစဉ်သည်။ CAFTA တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကော့စတာရီကာ၊ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၊ ဂွာတီမာလာ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်နှင့်နီကာရာဂွာတို့ပါဝင်ပြီးလက်တင်အမေရိကရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏တတိယအကြီးဆုံးစျေးကွက်ဈေးဖြစ်သည်။
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသောအဖွဲ့အစည်းများသည်၎င်းတို့အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့ကထိုနည်းတူပင်ကြီးထွားလာ။ နက်ရှိုင်းသောရရှိနိုင်သည့်တောင်အမေရိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်သူတို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုအိမ်မှဝေးကွာစွာစုံစမ်းနိုင်သည်။
လက်တင်အမေရိကနှင့်ကာရေဘီယံနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတွင်လေ့ကျင့်မှုသည်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။ ဆွေမျိုးတော်များအားလေ့ကျင့်ခြင်းသည်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်း၏အားသာချက်များဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏အလုပ်ဈေးကွက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော developer များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးကြပ်သူများနှင့်ထင်ရှားသောနည်းပညာအဖွဲ့အစည်းများမှအစပြုသူများ၏လူ ဦး ရေများပြားစွာရှိနေသည်။
ဂျီဒီပီအားဖြင့်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံသည်ဂျီဒီပီအားဖြင့်ကာရစ်ဘီယံတွင်ဒုတိယအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ တွင်ဂျီဒီပီဒေါ်လာ ၈၅ ဘီလီယံ (ယခင်နှစ်ထက် ၇ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့သည်) ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်း၏အိမ်နီးချင်းစျေးကွက်သည်တင်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုအသည်းအသန်ဆာငတ်နေသည်။
နိုင်ငံသည်ပြည်တွင်းရေးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုမရှိသောတိုက်ရိုက်အကျိုးစီးပွားနှင့်စီးပွားရေးကိုတရား ၀ င်စနစ်နှင့်တိုးတက်မှုများဖြင့်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ဥပမာ ProDominica ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အကျွမ်းတဝင်မရှိသောစီးပွားရေးနှင့်စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းများကိုနေရာဒေသအားလုံးနီးပါးတွင်ခွင့်ပြုထားသည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်နိုင်ငံသည်လုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်နေသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ရှင်းလင်းသောတာဝန်ပေးမှုအားပေးသည်။
ဟေတီ - ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအစွန်အဖျားတိုးတက်မှု။
အကဲဖြတ်မှုနှုန်းသည် ၄၂.၂% ခန့်ရှိပြီးကုန်းမကြီး၏ပုံမှန် (42.2%) ထက်အနည်းငယ်နိမ့်ကျပါသည်။ ထို့အပြင်လက်တင်အမေရိကတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာသည်။ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ဤစက်ဝန်းသည် ၁၄.၅ ရက်သာကြာသည်။ ထို့အပြင်နိုင်ငံသည်သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုခိုင်မာတောင့်တသည်။
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဖောက်သည် ၁၀ သန်းကျော်၏ဈေးကွက်သို့ကြီးထွားရန်အကြံပြုသည်။
ထို့အပြင်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောဈေးနှုန်းလည်းရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အနိမ့်ကျအလုပ်နှင့်လုပ်အားခများကြောင့်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကိုပြီးမြောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့အား CARICOM လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအပေါ်အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်စေသည်။
ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာ၊ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ဒိုမီနီကာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုတွင်တည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
Dominica ရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများကိုအစမှအဆုံးသတ်ရန်နှင့် Dominic ရှိ virtual office၊ သင်၏အလုပ်အကိုင်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ Dominica ရှိစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ ဒိုမီနီကာတွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဒိုမီနီကာတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဒိုမီနီကာတွင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း၊ Dominica ရှိ CRM Solutions၊ ကုန်သည်အကောင့်ဒိုမီနီကာသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုသည့်တံခါးဒိုမီနီကာ၊ အရင်းအနှီးငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Dominica ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Dominica ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒိုမီနီကာတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဒိုမီနီကာတွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊
Dominica တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက်: Dominica နှင့် Offshore ကုမ္ပဏီများတည်ထောင်ခြင်းနှင့် Dominica မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ Dominica ၌ဖြစ်စေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ Dominica ရှိစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသောကျွမ်းကျင်သည့် ၀ န်ထမ်းများကိုငှားရမ်းရာတွင်ကူညီသည်။ Dominica ရှိကုန်ပစ္စည်းများအရောင်းနှင့်ဝယ်ယူမှု၊ ဒိုမီနီကာကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာနံပါတ်များ၊ ဒိုမီနီကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချဲ့ထွင်မှု၊ ဒိုမီနီကာ၏တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဒိုမီနီကာရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဒိုမီနီကာရှိ CRM Solutions၊ ကုန်သည်စာရင်းနှင့်ငွေပေးချေရေးဂိတ် ဒိုမီနီကာတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဒိုမီနီကာတွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ၊ ဒိုမီနီကာ၏လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယနှင့်လိုက်နာမှု၊ ဒိုမီနီကာတွင်ရှိသောအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ ဒိုမီနီကာ၏အီးကောမတ်စ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒိုမီနီကာတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နှင့် Dominic ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတစ် ဦး အမည်ကိုရန် အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်။
Dominica အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Dominica အတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Dominica နဲ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ယောက်လို့ပြောရင်မှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီသည်။ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့်ဒိုမီနီကာတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Dominica အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Dominica ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Dominica ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကသင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဒိုမီနီ (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဒိုမီနီ (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဒိုမီနီ
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဒိုမီနီ
Dominica BUSINESS COMPANY အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
ကုန်သည်စာရင်း Dominica / Payment Gateway Dominica
Dominica BUSINESS COMPANY အတွက်လျာထားသောဒါရိုက်တာ
Dominica ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Logo ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း Dominica
Dominica ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Dominica Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာခြင်း
Dominica စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ၏ Apostille
Dominica Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်သံရုံးမှတရားဝင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအတွက် Chop and Seal Dominica
Dominica ရှိ International Business Company အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
●နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဒိုမီနီကာ (၁ နှစ်) အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်ခ - ဒေါ်လာ ၈၀၀
●ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၁၅၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ။ )
●ဒိုမီနီကာရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်သင့်အတွက်သင့်တော်တဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းငါတို့ကပေးတယ်၊ အဲဒီမှာအသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
Dominica ၌စီးပွားရေးစတင်ရန်ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံပေးသည်။ သင်ဒိုမီနီကာ (သို့) နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းခံနိုင်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဒိုမီနီကာအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့် Dominica ၌တည်၏
သင်သည် Dominica တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်လိုပါက Dominica ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Dominica ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ Dominica ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ဒိုမီနီကာရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Dominica ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဒိုမီနီကာအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ဖွဲ့စည်းသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဒိုမီနီကာမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီပေးပါမည်။ ငါတို့မှတစ်ဆင့်ဒိုမီနီကာ။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဒိုမီနီကာတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါကသင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်ဒိုမီနီကာအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ပေးနိုင်သည်။ ထိုအကူအညီများတွင်ဒိုမီနီကာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သောကျွမ်းကျင်မှုများပါဝင်သည်။ အဘို့ ဒိုမီနီကာနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒိုမီနီကာရှိလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
Domin Dominica အတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
Domin Dominica အတွက်နေထိုင်ခွင့်
Domin Dominica အတွက်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
Domin Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဒိုမီနီ ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ဒိုမီနီ.
ကျွန်ုပ်တို့သည် Dominica ၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်ဒိုမီနီကာရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒိုမီနီကာရှိမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များကြောင့်ဒိုမီနီကာတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။
Dominica ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ - ဒိုမီနီကာတွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး မှပင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးတိုင်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ Dominica ရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Dominica အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Dominica ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှု / ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများတွင် -
Dominica အတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
Dominica ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်ဆောင်းပါးများ / Dominica ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ။
Dominica ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ဝေမျှခြင်း / ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ၏လက်မှတ်စာအုပ်။
Dominica တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Dominica / Offshore Business Company တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လက်မှတ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ Dominica ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင် / Dominica ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင် Dominica ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ / ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ။
Dominica ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ / Dominica ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ Dominica ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ / Dominica ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သင်သည်ဒိုမီနီကာတွင်လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိပဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထားသည့်ဒိုမီနီကာခွင့်ပြုချက်ပြုပါက Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်စင်မဲ့လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောဒိုမီနီကာတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: လောင်းကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ထီ၊ အရောင်းအ ၀ ယ် / အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဒိုမီနီကာအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္financialာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံဆင်းသက်လာသောတူရိယာများနှင့်အခြားဒိုမီနီကာငွေကြေးများ၊ Dominica ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလဲလှယ်သည်။
သင် Dominica ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာတွင်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ချထားရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဒိုမီနီကာနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန် ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောဒိုမီနီကာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့် Dominica ရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ Dominica ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဒိုမီနီကာရှိမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများမှတဆင့်ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ပေးဆောင်သူများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဒိုမီနီကာတွင်ကြီးမားသောအစုစုကိုစီမံသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဒိုမီနီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဒိုမီနီကာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။
ဒိုမီနီကာရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ | Roseau ရှိ Corporate Services
ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဒိုမီနီကာရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဒိုမီနီကာမှစီးပွားရေးအကြံပေးများ၊ ဒိုမီနီကာရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဒိုမီနီကာမှကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Dominica ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်, Dominica ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဒိုမီနီကာရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ
Dominica ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | Roseau ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ
Dominica နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Dominica တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Dominica တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီ Dominica တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ဒိုမီနီ.
Dominica ရှိအကောင့်များ Outsourcing
သင် outsource လုပ်နိူင်ရန်သင်၏ကုမ္ပဏီ Dominica တွင်ထည့်သွင်းထားသည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဒိုမီနီကာ၌တည်၏။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီ၏စတော့ရှယ်ယာများဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်။
HR အတိုင်ပင်ခံ ဒိုမီနီကာတွင်ပေးအပ်ထားသည့်သင်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ဒိုမီနီကာတွင် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုသည်သင်၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Dominica ရှိအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ နှင့်ဒိုမီနီကာနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းဒိုမီနီကာ၌တည်၏
Dominica တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဒိုမီနီ.
Dominica ရှိ cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်မှုများအတွက်ဒိုမီနီကနေ။
Dominica ရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ Dominica ရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအဝင်သင်၏ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - Dominica အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Dominica ရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအ ၀ င် Dominica ရှိအခြားသော VoIP ဖြေရှင်းချက်များ Dominica ရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံရှိဒိုမီနီကာမှ
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ဒိုမီနီ Dominica တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဒိုမီနီ, Dominica ရှိ CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Dominica ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသောဆော့ဝဲလ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒိုမီနီကာ | စျေးနှုန်းချိုသာသောစီးပွားကူးသန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဒိုမီနီကာ
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဒိုမီနီကာတွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပူးပေါင်းရန်ပါ ၀ င်သောဒိုမီနီကာသတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာနှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာဖြင့်သူတို့၏ Dominica တွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒိုမီနီကာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဒိုမီနီကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်ရောက်ရှိနေသည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒိုမီနီကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒိုမီနီကာကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Dominica တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထောက်ပံ့သည် Dominica တွင်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း Dominica တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဒိုမီနီကာတွင် IC ပါဝင်မှု ဒိုမီနီကာ IBC မှတ်ပုံတင် LLC ဒိုမီနီကာအတွက်မှတ်ပုံတင် LLC ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒိုမီနီကာတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာရှိဒေသခံများနှင့်ဒိုမီနီကာတွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဒိုမီနီကာတွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ Dominica၊ Offshore Offshore Business Company မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dominica၊ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dominica ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dominica ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dominica ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dominica ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dominica ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒိုမီနီကာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုဒိုမီနီကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒိုမီနီကာကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒိုမီနီကာတွင် IC ဖွဲ့စည်းမှုရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းဒိုမီနီကာတွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်ကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်ကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ , Dominica IC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဒိုမီနီကာအိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဒိုမီနီကာအိုင်စီတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဒိုမီနီကာကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဒိုမီနီကာကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒိုမီနီကာရှိ IBC ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်၊ ဒိုမီနီကာတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Dominica IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dominica IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dominica IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dominica ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dominica ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒိုမီနီကာတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုဒိုမီနီကာတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်ရှိသော LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Dominica LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Dominica LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Dominica LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Dominica ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Dominica ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒိုမီနီကာတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ပံ့သည်။ ဒိုမီနီကာတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ Dominica LLC တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dominica LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dominica LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Dominica LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Dominica Offshore LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Dominica Offshore LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒိုမီနီကာရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများကိုဒိုမီနီကာရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာအိုင်ဘီအိုင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှု၊ ဒိုမီနီကာရှိကမ်းလွန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Dominica IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dominica IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dominica IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dominica ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dominica ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Dominica ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Dominica ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ Dominica တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ IC ကို Dominica တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကို Dominica တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ LLC Dominica တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ Dominica တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ Dominica တွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုထောက်ပံ့သည်။ Dominica တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဒိုမီနီကာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒိုမီနီကာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ Roseau မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Roseau တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Roseau မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Roseau မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Roseau မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Dominica တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Roseau တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များဟုလည်းလူသိများသောဒိုမီနီကာရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သည် Roseau ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Roseau ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Roseau ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Roseau ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
Dominica တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Roseau တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
သင် Dominica တွင်တတ်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဒိုမီနီကာတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Roseau ရှိကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Roseau ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Roseau ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Roseau ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
Dominica တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Roseau တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ ဒိုမီနီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဒိုမီနီကာတွင်တည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Roseau တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ Roseau တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ Roseau တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ၊ Roseau ရှိ setup ကုမ္ပဏီ၊ Roseau တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Roseau တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Roseau ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။
Dominica တွင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Roseau ရှိကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတ ဦး ဖြစ်ပြီးဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာတွင်ဘဏ်စာရင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအဝင်၊ နိုင်ငံခြားသားများအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီပံ့ပိုးသည်၊ Roseau ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Roseau တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Dominica | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Roseau
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဒိုမီနီကာတွင်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဒိုမီနီကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေဒိုမီနီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ကြေးကုန်ကျစရိတ်ဒိုမီနီကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဒိုမီနီကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဒိုမီနီကာကုမ္ပဏီတည်ထောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ဒိုမီနီကာတွင် ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဒိုမီနီကာတွင်၊ ကုမ္မဏီသည်ဒိုမီနီကာတွင်ကုန်ကျသည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဒိုမီနီကာ | Roseau ရှိစျေးသက်သာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
Dominica တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Roseau တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
Dominica ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား Dominica ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Dominica တွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒိုမီနီကာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒိုမီနီကာရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒိုမီနီကာတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း LLC ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒိုမီနီကာတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Dominica ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထည့်သွင်းပါ ဒိုမီနီကာတွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ ဒိုမီနီကာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ IC ဒိုမီနီကာတွင်ထည့်သွင်း IBC ကို Dominica တွင်ထည့်သွင်းပါ ဒိုမီနီကာတွင် LLC ထည့်သွင်းပါ အင်မီနီယံ LLC ကုမ္ပဏီဒိုမီနီကာတွင် Dominica ရှိ IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ
Dominica ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Dominica ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Dominica ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုကိုလည်းမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောပမာဏနှင့်ဒိုမီနီကာရှိအရည်အသွေးကောင်းသည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကြောင့်၊ ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေးကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ Dominica တွင်နှင့် Dominica ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများသင့်အား Dominica ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
Dominica ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Dominica ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Dominica တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Dominica ရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
Roseau တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င် Dominica ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအထူးကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။ သင်သည်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီး Dominica တွင်ကုမ္ပဏီဖွင့်လိုပါကသင့်တော်သောနေရာတွင်ရှိသည်။
သင်သည်ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဒိုမီနီကာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ထိုနည်းတူစွာ Dominica တွင်လည်း Roseau တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Roseau တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Roseau တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Roseau ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Roseau တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Roseau တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ နှင်းဆီ
Dominica တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Roseau တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
အရှေ့ကာရစ်ဘီယံဗဟိုဘဏ်- ဒိုမီနီကာသည် ECCB အသင်း ၀ င်ဖြစ်သည်။
DEXIA - ဒိုမီနီကာပို့ကုန်တင်သွင်းမှုအေဂျင်စီ
Destination Dominica - ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလမ်းညွှန်
Dominica လမ်းညွှန်- Dominica သို့လာရောက်လည်ပတ်သောခရီးသွားများအတွက်အချက်အလက်များ။
တစ် ဦး က Virtual Dominica
Waitukubuli လမ်းကြောင်း- ၁၁၅ မိုင် (၁၈၅ ကီလိုမီတာ) အကွာတွင်ကရစ်ဘီယံ၌အရှည်ဆုံးတောင်တက်လမ်းကြောင်းနေရာထိုင်ခင်း
Carib နယ်မြေ Guest ည့်အိမ်
Morne Trois Pitons အမျိုးသားဥယျာဉ်
Kairi FM ရေ
Dominica World Creole ဂီတပွဲတော်
Mas Domnik - ဒိုမီနီကာပွဲတော်.
Lennox Honychurch ၏ဒိုမီနီကာ
ကာရစ်ဘီယံစိုက်ပျိုးရေးသုတေသန & ဖွံ့ဖြိုးရေးအင်စတီကျု
ဘီဘီစီနိုင်ငံအကြောင်း - ဒိုမီနီကာ
FAO - ဒိုမီနီကာ
ဓနသဟာယ - ဒိုမီနီကာ
အမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်း - ဒိုမီနီကာ
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - ဒိုမီနီကာ
Citi ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ https://www.citibank.com/icg/sa/latam/dominican-republic/
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဒိုမီနီကာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုများရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှုကိုဆန့်ကျင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်ဤကဲ့သို့သော Clients များအားထောက်ခံမှုမပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ဒိုမီနီ အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ဒိုမီနီကာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●ဒိုမီနီကာအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာထဲမှ (သို့) ၀ င်ရောက်သောစက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်မဟုတ်။
●ဒိုမီနီကာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဒိုမီနီကာဥပဒေအောက်မှာအနက်ရောင်စာရင်းဝင်ထားတဲ့တရားမဝင်၊
●ဒိုမီနီကာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုဒိုမီနီကာအတွင်း (သို့) မှမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဒိုမီနီကာအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တစ်စုံတစ် ဦး သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်သို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာမှအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဓာတုပစ္စည်းများကိုဒိုမီနီကာရှိ (သို့) ဒိုမီနီကာမှနျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သောနျူကလီးယားပစ္စည်းများ၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●ဒိုမီနီကာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပစ္စည်းများကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုဒိုမီနီကာရှိသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သို့သွားသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
●ဒိုမီနီကာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ၊ အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) ဒိုမီနီကာအတွင်း (သို့) မှလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပုံစံများအပါအ ၀ င်။
●ဒိုမီနီကာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်ဒိုမီနီကာအတွင်းမှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်ရောက်သောဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းများမရှိပါ။
●ဒိုမီနီကာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုဒိုမီနီကာရှိတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဒိုမီနီကာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဒိုမီနီကာမှသို့မဟုတ်မှဒိုမီနီကာကိုပေးမထားဘူး။
●ဒိုမီနီကာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းပစ္စယများရောင်းဝယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဒိုမီနီတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဒိုမီနီ, ဒိုမီနီ ဘဏ်အကောင့်, ဒိုမီနီ ယုံကြည်မှု ဒိုမီနီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဒိုမီနီ။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ဒိုမီနီကာအဘို့
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-dominica/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-dominica/ မှသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-dominica/